सिईडिबी हाइड्रोपावरका लगानीकर्तालाई खुसीको खबर, ओपनिङ रेञ्ज कति?
काठमाडौं । सिईडिबी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडकाे साधारण सेयर (आईपीओ) काे बाँडफाँड सम्पन्न भएपश्चात हाल अधिकांश लगानीकर्ताहरूमा उब्जिएकाे प्रश्न भनेकाे सिईडिबी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओले ओपनिङ्ग रेञ्ज कति पाउला ? सिईडिबी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडकाे मूल्य दाेश्राे बजारमा कतिसम्म पुग्ला ? जस्ता हुन् । त्यसैले, यहाँ हामी प्राय सबै लगानीकर्ताहरूमा चासाेकाे विषय बनेकाे सिईडिबी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको ओपनिङ्ग रेञ्जकाे विषयमा कुरा गर्नेछाैँ ।
नेप्सेले कम्पनीकाे पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्युनतम १३८ रूपैयाँ ७९ पैसादेखि अधिकतम ४१६ रुपैयाँ ३७ पैसासम्म ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्ने सम्भावना रहेकाे छ । नेप्सेले हरेक कम्पनीकाे पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज ताेक्ने गर्दछ । सेबाेनमा प्रकाशन भएकाे विवरण पत्र अनुसार सिईडिबी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडकाे आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिसेयर नेटवर्थ १३८ रूपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ । साेही नेटवर्थकाे ३ गुणा ४१६ रुपैयाँ ३७ पैसा हुन्छ ।